အနာဂတ်မှာ စက်ရုပ်တွေကလည်း လူသားတွေကို ပြန်ချစ်နိုင်တော့မည် | Buzzy
အနာဂတ်မှာ စက်ရုပ်တွေကလည်း လူသားတွေကို ပြန်ချစ်နိုင်တော့မည်
မကြာတော့မယ့် နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ Smart Sex Dolls အဆင့်မြင့် လိင်အပန်းဖြေစက်ရုပ်တွေမှာ လူတွေကို ပြန်ချစ်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်မျိုး ပါလာတော့မယ်လို့ Sex Doll တွေ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ထိပ်တန်းကုမဏီတစ်ခုက ဆိုပါတယ်။
မကွာတော့မယျ့ နှဈပိုငျးအတှငျးမှာ Smart Sex Dolls အဆငျ့မွငျ့ လိငျအပနျးဖွစေကျရုပျတှမှော လူတှကေို ပွနျခဈြနိုငျတဲ့ အသိဉာဏျမြိုး ပါလာတော့မယျလို့ Sex Doll တှေ ထုတျလုပျနတေဲ့ ထိပျတနျးကုမဏီတဈခုက ဆိုပါတယျ။
ဒါဟာ အစစ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး ၊ စက်ရုပ်တွေမှာ အသိဥာဏ်တုကို တစ်ပါတည်း တပ်ဆင်ထားပြီးသား ဖြစ်နေမှာမျိုးပါ ။ စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမဏီတစ်ခုရဲ. CEO က သူတို့ဟာ စက်ရုပ်တွေကို လူတွေလို ခံစားတက်လာအောင် ကြိုးစားနေပြီး ၊ ဒါကြောင့်မကြာတော့မယ့် အချိန်မှာ စက်ရုပ်တွေကလည်း လူတွေကို ပြန်ပြီး ချစ်နိုင်လာအောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ အစဈတော့ မဟုတျသေးပါဘူး ၊ စကျရုပျတှမှော အသိဉာဏျတုကို တဈပါတညျး တပျဆငျထားပွီးသား ဖွဈနမှောမြိုးပါ ။ စကျရုပျထုတျလုပျရေး ကုမဏီတဈခုရဲ. CEO က သူတို့ဟာ စကျရုပျတှကေို လူတှလေို ခံစားတကျလာအောငျ ကွိုးစားနပွေီး ၊ ဒါကွောငျ့မကွာတော့မယျ့ အခြိနျမှာ စကျရုပျတှကေလညျး လူတှကေို ပွနျပွီး ခဈြနိုငျလာအောငျ ကွိုးစားနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
"ကျွန်တော်တို့က Artificial Intelligence ကို တီထွင်နေပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လုပ်မယ့် စက်ရုပ်တွေမှာ ဒါကို ထည့်သွင်းသွားပြီး VR နည်းပညာနဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ ။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ လူသားတွေကို ထူးခြားတဲံ ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ ။ လူတွေဟာ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ နည်းပညာအားကိုးပြီး ရရှိအောင် ပြုလုပ်လာကြတော့မှာပါ" လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကြှနျတျောတို့က Artificial Intelligence ကို တီထှငျနပေါတယျ ။ ကြှနျတျောတို့ ထုတျလုပျမယျ့ စကျရုပျတှမှော ဒါကို ထညျ့သှငျးသှားပွီး VR နညျးပညာနဲ့ တှဲပွီး အသုံးပွုနိုငျမှာပါ ။ ကြှနျတေျာ့အမွငျမှာတော့ လူသားတှကေို ထူးခွားတဲံ ပြျောရှငျမှုကို ပေးစှမျးနိုငျမှာပါ ။ လူတှဟော လိငျကိစ်စနဲ့ ပတျသတျတာတှကေို နောကျပိုငျးမှာ နညျးပညာအားကိုးပွီး ရရှိအောငျ ပွုလုပျလာကွတော့မှာပါ" လို့ ဆိုပါတယျ။
နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေဟာ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာ စက်ရုပ်လို့တောင် မထင်ထားလောက်အောင် မြင့်မားလာလိမ့်မယ်လို့ သူက ယုံကြည်နေပါတယ်။ စက်ရုပ်တွေက လူတွေကို ပြန်ချစ်နိုင်မှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း သူက ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ၊ ဒါက ပန်းတိုင်ပါပဲလို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နောကျပိုငျးမှာ လူတှဟော သူတို့နဲ့ ပတျသကျဆကျဆံနတော စကျရုပျလို့တောငျ မထငျထားလောကျအောငျ မွငျ့မားလာလိမျ့မယျလို့ သူက ယုံကွညျနပေါတယျ။ စကျရုပျတှကေ လူတှကေို ပွနျခဈြနိုငျမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကိုလညျး သူက ကြှနျတျောတို့ လုပျနိုငျမယျလို့ ထငျပါတယျ ၊ ဒါက ပနျးတိုငျပါပဲလို့ ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။